एकछिनको गल्तीले पाँच वर्षसम्म पछुताउने वातावरण नहोस् : बडुवाल - Morning Bell
एकछिनको गल्तीले पाँच वर्षसम्म पछुताउने वातावरण नहोस् : बडुवाल
अंकुश कुँवर	धनगढी	पुस २९, २०७८
नेपाली काँग्रेस कैलालीको अधिवेशन पटक–पटक सर्दै पुनः आगामी माघ १५ गतेका लागि तोकिएको छ । दोस्रो पटक यही पुस २७ गते हुने भनिएको अधिवेशन माघमा सरेको हो । प्रदेश अधिवेशन अगाडिदेखि नै चुनावी तयारीमा रहेका पदका आकांक्षी नेताहरु अहिले पनि प्रतिनिधिहरुलाई भेटेर आफ्नो पक्षमा माहोन सृजना गर्न व्यस्त छन् । कैलाली जिल्ला सभापतिका लागि आकांक्षी देखिएकामध्ये भीम बडुवाल पनि एक हुन् । यसअघिको जिल्ला अधिवेशनमा नरनारायण शाह (मनु)संग पराजित भएका बडुवाल यसपटक पनि सभापतिको दौडमा छन् । चुनावी तयारीका लागि उनी अहिले जिल्ला दौडाहामा छन् । चुनावी तयारीका बारेमा केन्द्रीत हुँदै मर्निङ बेल दैनिकले सभापतिका आकांक्षी बडुवालसंग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः
काँग्रेस कैलालीको सभापतिमा तपाईको उम्मेदवारी किन र केका लागि ?
पहिलो कुरा त नेपाली काँग्रेस कैलालीलाई राम्रो र साझा पार्टी बनाउन मेरो उम्मेदवारी हो । मेरो होइन हाम्रो पार्टी बनाउने हो । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नहुने वातावरण बनाउनका लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।
पार्टी सभापतिमा अन्य आकांक्षी पनि छन्, तपाईले जित्ने सम्भावना कति छ ?
म विश्वस्त छु । अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा पनि पार्टी सभापतिमा दोस्रो भएको थिएँ । मलाई लाग्छ यसपटक प्रतिनिधिहरुले मलाई न्याय गर्नुहुन्छ । मलाई पार्टी सभापति बनाएर कैलाली काँग्रेसलाई चलाउने जिम्मेवारी दिनुहुनेछ भन्ने पूरा विश्वास छ ।
सभापतिमा जित्ने गरेर कस्तो तयारी गरिरहनुभएको छ ?
मुख्य तयारी भनेको कार्यकर्ता साथीहरु र अग्रज नेताहरुसंग भेटघाट गर्ने काम भइरहेको छ । म अहिले त्यसैमा दौडिरहेको छु । भेटघाटका क्रममा ‘मलाई यसपटक सभापतिमा मौका दिनुहोस्, म पार्टीलाई थप राम्रो बनाउँछु, सबैको पार्टी बनाउँछु’ भनेर आग्रह गरिरहेको छु । सबैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छु ।
निर्वाचनको मिति सर्दै गर्दा कति असर परेको छ ?
पटक–पटक मिति सार्दा पक्कै पनि असहज नै हुन्छ । एउटा उम्मेदवारलाई मानसिक, आर्थिक, भौतिकलगायतका समस्या पर्छ । यसमा सबैभन्दा बढी आर्थिक समस्या हुन्छ ।
तपाईले जित्ने आधारहरु के–के हुन् ?
पहिलो आधार त सबैको मायाप्रेम, सद्भाव हो । जिल्लाभरका २ हजार ५७२ प्रतिनिधिहरुले विवेकशील निर्णय गर्नुहुन्छ । पार्टीमा सबैले नयाँ, खट्नसक्ने र वैचारिक नेतृत्व चाहनुभएको छ । त्यसका लागि उपयुक्त म आफूलाई ठान्छु । यो पनि मेरो एक आधार हो । साथीभाई र अग्रजको आत्मबललाई बलियो बनाउनका लागि र सबैलाई मिलाएर लैजान सक्छु ।
उम्मेदवारी बन्ने आकांक्षा राख्दै गर्दा के–के एजेण्डा अघि सार्नुभएको छ ?
मैले यसअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न १० वटा एजेण्डाहरु पेश गरेको छु । बुँदागत रुपमा भन्नुपर्दा पहिलो नम्बरमा जिल्लाका १८ हजार भन्दा बढी क्रियाशील साथीहरुको स्वाभिमानको रक्षा गर्दै पार्टीलाई सबैको साझा बनाउने प्रयत्न गर्नेछु, भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणका लागि अभियानहरु थालनी गर्नेछु । गुटबन्दीमुक्त काँग्रेसका निमित्त ‘युवा जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने, आउने निर्वाचनहरूमा पार्टीलाई कम्तीमा पनि दुई तिहाइ स्थानमा पर्याउन प्रयत्न गर्ने, पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई विकास निर्माणका एजेन्डामा लगाउने र हरेक जात जातिका बिचमा सद्भाव कायम गराउने कार्यमा लाग्नेछु ।
त्यस्तै भातृ सङ्गठनहरूलाई क्रियाशील र चुस्त दुरुस्त बनाउने, पार्टी कार्यालय व्यवस्थित गरी हरेक कार्यकर्ताको गुनासो र समस्याको समाधान गर्ने, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रता दिने, पार्टी भित्र तलैदेखि समावेशिता, पार्टीमा मूल्य–मान्यता, नीति प्रधानतामा आफू प्रतिबद्धता हुनेछु ।
जिल्ला दौडाहाका क्रममा पार्टीका प्रतिनिधिहरुलाई भेट्दा कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ?
मैले भेटेजतिका जतिपनि साथीभाई, अग्रज सबै मेरो उम्मेदवारीलाई लिएर उत्साहित हुनुभएको छ । मैले उहाँहरुबाट सुझाव लिइरहेको छु । मैले उहाँहरुबाट प्ररणा पाएको छु । मलाई भरोसा र जिताउने विश्वास दिलाउनुभएको छ । उहाँहरुले पार्टीमा परिवर्तन देख्न खोज्नुभएको छ । त्यो परिवर्तन अनुहारले नभई क्षमता र प्रतिभाले गर्ने चिज हो । पार्टीमा सभापतिको उम्मेदवार को छ र कसले गर्न सक्छ भनेर उहाँहरुले बुझ्नुभएको पनि छ ।
अरु उम्मेदवार भन्दा तपाई के फरक ?
काँग्रेसको जिल्ला सभापतिका लागि मेरा अग्रज दाजुहरु पनि आकांक्षी हुनुहुन्छ । सबैले यो पार्टीमा योगदान दिनुभएको छ । लामो समयदेखि मेहनत पनि गर्नुभएको छ । उहाँहरु सबैलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु । उहाँहरुलाई शुभकामना दिन पनि चाहन्छु । तर यसपटक चाहिँ कार्यकर्ताले मलाई मत दिउनु र विश्वास पनि छ । मसंग केही एजेण्डाहरु छन् । त्यसलाई लागू गर्न सक्ने मंसंग दृढ विश्वास पनि छ । म पार्टीका लागि १८ घण्टा अहोरात्र खट्न पनि सक्छु । प्रतिपक्षी पार्टीहरुलाई वैचारिक रुपमा परास्त पनि गर्न सक्छु । अग्रजलाई सम्मान गर्दै जुनियरहरुलाई पनि मिलाएर लैजान सक्ने मसंग खुबी छ । अर्को कुरा म नेविसंघबाट राजनीतिमा आएको मान्छु हुँ । हिलोमाटोमा खेल्दै पैदल हिँडेर जिल्लाभर पुगेको छु । सबै नेता कार्यकर्ताको मनोभावना बुझेको छु ।
तपाईको उम्मेदवारी संस्थापन पक्षबाट हुन्छ कि इतर पक्षबाट हुन्छ ?
पहिलो कुरा त म नेपाली काँग्रेसको कार्यकर्ता हुँ । अहिले जिल्ला सभापतिका लागि आकांक्षी छु । दोस्रो नम्बरमा म पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै टीमको मान्छु हुँ म । उहाँकै छाहरीमुनी बसेर हामीले काम गर्ने हो ।
देउवा पक्षबाट अहिलेसम्म केही पाउनुभएको छ ?
उहाँहरुले अहिलेसम्म मलाई माया स्नेहबाहेक अरु त केही दिनुभएको छैन । पहिले पनि पार्टी सचिव रपछिल्लो पटक सभापतिमा हारेको हुँ । दुबै पटक मैले उहाँहरुबाट जुन खालको सहयोग समन्वय पाउनुपथ्र्यो त्यो पाउन सकेको छैन । मैले सहयोग पाएपनि नपाएपनि मैले त उहाँहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छु । किन भने राजनीतिक भनेको एक दिनको कुरा होइन । ‘एउटै माघले जाडो जाँदैन’ भनेको जस्तै एकैछिनले सबै कुरा तय गर्दैन । अवश्य पनि एक न एकदिन उहाँहरुले सहयोग दिएर माया दिनुहुनेछ भन्ने लागेको छ ।
तपाईलाई संस्थापन इतर पक्ष हो भनेर पनि आरोप लाग्ने गर्छ नि ?
भन्नेका मुख छोप्न सकिँदैन । मुखमा टालो लगाउन सकिँदैन । मुलभूत कुरामा देउवालाई मैले सभापतिमा सहयोग गरेकी गरेनँ । लगातार तीनवटा निर्वाचनमा मैले भोट हालेकी हालेनँ त्यो कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यो देउवालाई सोध्ने कुरा हो । अरुले के भन्छन् भन्ने कुरामा लाग्नु भएन ।
पार्टीमा जहिल्यै पुस्तान्तरणको कुरा आइरहन्छ, किन ?
कैलालीमा पुस्तान्तरण भईनै रहेको छ । यसअघि कैलालीकै सभापतिमा मनु शाह कमै उमेरमा सभापति बन्नुभएकै हो । त्यो पुस्तान्तरण हो । यो ठूलो कुरा होइन । व्यक्तिसंग विचार, दृष्टिकोण, जनताप्रतिको प्रतिबद्धता छ कि छैन भन्ने कुरा नै प्रमख कुरा हो । मौका पाउँदा प्रतिबद्ध भएर काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हो । पार्टी भित्र बैचारिक नेतृत्व आउनुपर्र्छ भन्ने सबैको धारणो हो ।
पार्टीले तपाईलाई आधिकारिक उम्मेदवारको रुपमा अगाडि सार्ने सम्भावना छ ?
काँग्रेस भित्र कुनै आधिकारिक अनाधिकारिक भन्ने हुँदैन । जो चुनाव लड्छ उ आधिकारिक हुन्छ । सबैलाई चुनाव लड्ने अधिकार छ । कैलालीमा जो आएपनि देउवालाई नेता मान्ने व्यक्तिनै आउँछौं । देउवाबाट केही आश्वासन पनि पाएको हुँला नि ।
पार्टी प्रतिनिधिलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ?
सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु । पार्टी राम्रो भएको हर्न मन छ भने आत्मा साक्षी राखेर के ठीक के बेठीक भनेर निर्णय लिनुहोस् । अहिले भोट हाल्न गरिने एक दिनको गल्तीले बाँकी पाँच वर्ष पछुताएर बस्ने अवस्था नआवस् भन्न चाहन्छु ।
२९ पुस २०७८, बिहीवार १३:५४ बजे प्रकाशित
नेकपा एमाले कैलालीका इन्चार्ज रानालाई कोरोना पुष्टि